05 Nov 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Alamuddiin Malamaltummaan Shakkamee
Mohammad Alamuddiin dureessa fi abbaa qabeenya beekamaa biyya Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa keessatti kan beekamu guyyaa har’a mana hidhaatti galfameera. Bara kana biyyi Saudi Arabiyaa haaromsa gadii faggeenya gubbaa hamma jalatti haaromsaa jiru. Motiiwwan biyya sana keessa jiran kanneen kiraasassabdoota fi malamaltummaadhan kan shakkaman baayyinaan aango fi biyyaa sanarra ari’amanii jiru. Haaromsi gadii fageenya kun itti aanaa mootii Saudi Arabiyaa Mohammad Ibn Salmaan dhaan durfamaa jira.
Biyya Itoophiyaa keessatti Alamuddiin qabeenya garaagara naannoo Oromiyaa, Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuz keessa qabaatus, qabeenya kana bifa hannaatin akka argateetu dubbatama. Qabeenya inni Oromiyaa qabu: warshaa warqii godina Gujii aana Shaakkisoo fi Wallagga Lixaa, Arsii Lixaatti lafa qonnaa hamma biyyaa Jibuuti ga’us akka qabuutu dubbatama.
Alamuddiin dabalatees namoota biroo kan isa wajjiin kan hidhaman hamma namoota 11 ol ni ta’a. Namootni kunniin hanna fi malamaltummaa biyyaa Saudi Arabiyaa keessatti shakkaman. Al Amoud haatisaa Amaara fi Abbaansaa sanyii moototaa biyyaa Arabaa akka ta’e ni beekama.
Odeefannoo dabalataa yerooma arganneen marsariiti keenya kanarratti nu hordofaa.
Welcome back dalagaa.com 😗